कमल ज्ञवाली भन्छन्ः यी हुन् मलाई फसाउने
शिव सत्याल/कृष्णसिंह लोथ्याल काठमाडौं, ३० वैशाख
तत्कालीन किस्ट बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक कमल ज्ञवालीले आफन्तकै कारण आफू फसेको बताएका छन् । बैंकिङ कसुरअन्तर्गत डिल्लीबजार कारागारमा रहेका ज्ञवालीले शिलापत्रसँगको कुराकानीमा यस्तो बताएका हुन् ।
‘मेरा साथीभाइ धेरै छन्, समस्याको बेलामा साथीभाइ र आफन्त चिनिँदो रहेछ । जतिबेला मलाई समस्या पर्यो, त्यो बेलामा मैले साथीभाइ सम्झिनँ, आफन्तको चंगुलमा परें, फसें,’ ज्ञवालीले भने ।
उनले आफ्नो खराब दशा चलेको कारण आफूलाई समस्या परेको बताए । बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेपछि २०७० जेठदेखि ज्ञवाली फरार थिए । गत असोजमा ज्ञवालीलाई नेपाल प्रहरीको कन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको थियो ।
बृन्दावन बसें, गीता पढें
बैंकिङ कसुरको अभियोग लागेपछि भागेका ज्ञवालीले भारतको बृन्दावनमा बसेको बताए । त्यहाँ बस्दा आफूले गीता, महाभारत, भागवत, ज्योतिषशास्त्र जस्ता विषयको अध्ययनमा समय वबताएको बताए ।
‘गीता, महाभारत, भावगत पढें, ज्योतिषशास्त्रको अध्ययन गरें, अध्यात्ममा लागें, यसरी नै बृन्दावनमा मेरो दैनिकी चलेको थियो,’ ज्ञवालीले भने ।
आफूलाई भारतीय प्रहरीले बृन्दावनमै समातेको ज्ञवालीले बताए । आफू अाध्यात्मिक क्रियाकलापमा लागेको भए पनि कसैले सूचना दिएकाले आफू पक्राउ परेकाे उनकाे बुझाइ छ ।
कसैलाई दोष दिन्नँ
जेलभित्र रहेका ज्ञवालीले आफ्नो मुद्दाको विषयमा खुलेर कुरा गरेनन् । आफ्नो ग्रहदशा नै नराम्रो चलेकोले पूर्वजन्मको भाग नै हो भन्ने निष्कर्ष उनले सुनाए ।
‘समयको खेल हो, मैले पनि केही गल्ती गरें होला, त्यो गल्ती गर्नैपर्ने वा यो अभियोग भोग्नै पर्ने लेखान्त थियो होला, अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ, अहिले म कसैलाई पनि दोष दिने मनस्थितिमा छैन, अबको मेरो संसार अध्यात्म हो, म त्यतैतिर लाग्छु,’ ज्ञवालीले भने ।
यस्तो छ अभियोग
ज्ञवालीलाई तत्कालीन किस्ट बैंकबाट जम्को प्रकाशन प्रालिलाई गैरकानुनी रुपमा ऋण दिई बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ । उनी बैंकको प्रबन्ध सञ्चालक रहेको बेलामा जम्कोलाई १२ करोड रुपैयाँको धितो लिएर १५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको अभियोग छ ।
सोही अभियोगमा पाटन उच्च अदालतले ५ असोज २०७३ मा ज्ञवालीलाई ४ वर्ष जेल र ६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ जरिबानाको सजाय सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय डिल्लीप्रसाद आचार्य र प्रमोदकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजालसले यस्तो फैसला सुनाएको थियो । उनकी श्रीमती गौरी खनाललाई ३ वर्ष जेल ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ बिगो जरिबानाको फैसला सुनाएको छ । यो मुद्दा अहिले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
विश्व आर्थिक मन्दीको प्रभाव ज्ञवालीमाथि !
सन् २००८ मा विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी भयो । रियलस्टेट क्षेत्रमा देखिएको उच्च मूल्यवृद्धिबाट एकैपटक मन्दी आएपछि सुरु भएको संकटले विश्वव्यापी रूपमा कारात्मक प्रभाव पार्यो ।
तर, विश्व बजार अर्थतन्त्रसँग खासै नजोडिएको नेपालमा सो मन्दीले धेरै ठूलो प्रभाव पारेन । जतिबेला एसियाली बजारमा रियलस्टेटको कारण बैंकिङ क्षेत्रसँगै आर्थिक अवस्था संकेततिर गइरहेको थियो, त्यो बेलामा नेपालमा पनि सहरी र अर्धसहरी क्षेत्रमा घरजग्गा कारोबारले उच्च मूल्य प्राप्त गरिरहेको थियो ।
२०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रियासँगै घरजग्गा कारोबार असाध्यै बढ्यो । सो समयतिर घरजग्गाको भाउ अकासियो । ज्ञवाली साझेदारीमा जग्गा प्लटिङमा पनि संलग्न भए ।
ज्ञवाली मात्रै होइन, नेपाली बैंकहरु पनि घरजग्गा क्षेत्रमा अधिक लगानी गरिरहेका थिए । उनी प्रबन्ध सञ्चालक रहेको किस्ट बैंकले पनि घरजग्गा क्षेत्रमा व्यापक लगानी गरिरहेको थियो ।
यस्तै, परिवेशमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २ पुस २०६६ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा क्षेत्रमा कूल कर्जाको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लगानी गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गर्यो । त्यो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर विजयनाथ भट्टराई थिए ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिगत व्यवस्थापछि घरजग्गा क्षेत्रमा मन्दी आयो । व्यक्तिगत रुपमा आफूले र आफू प्रबन्ध सञ्चालक रहेको तत्कालीन किस्ट बैंकले पनि घरजग्गा क्षेत्रमा बढी लगानी गरेकोले ज्ञवाली र बैंक दुवै संकटमा परे ।
२०६६ पछि घरजग्गा मात्रै होइन, सेयर बजारमा पनि संकुचन आउन थाल्यो । सेयर बजारमा पनि ज्ञवालीको राम्रै लगानी रहेको बताइन्छ ।
राष्ट्र बैंकको त्यो छानबिन
घरजग्गा र सेयर बजारमा बढी लगानी गरेका ज्ञवालीलाई दुवै क्षेत्रमा एकैचोटि संकुचन आउँदा नराम्रो प्रभाव पर्यो । अझ २०६९ सालमा त ज्ञवालीविरुद्ध राष्ट्र बैंकमा ‘उजुरी’ नै पर्यो ।
ज्ञवालीविरुद्ध किस्ट बैंकबाट जम्को प्रकाशनको १२ करोड रुपैयाँको धितोमा १५ करोड रुपैयाँ ऋण दिएको उजुरी थियो । उजुरीपछि राष्ट्र बैंकले छानबिन थाल्यो । र, किस्टले जम्को प्रकाशनलाई दिएको १५ करोड ऋणमध्ये ३ करोड रुपैयाँ उठाउन भनियो । बैंकले सो ३ करोड ऋण तत्काल उठायो पनि । त्यो बेला नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर डा. युवराज खतिवडा थिए ।
सो काण्डमा राष्ट्र बैंकले ज्ञवालीलाई ५ लाख रुपैयाँ जरिबाना तिरायो । तर, ऋणी किशोर ढकाललाई भने बैंकिङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न सीआईबीलाई पत्राचार गरियो ।
सीआईबीको अनुसन्धानमा ढकाललाई दिएको ऋण ज्ञवालीले नै प्रयोग गरेको खुलेपछि २२ जेठ २०७० मा ज्ञवाली पत्नी गौरी खनाललाई महाराजगन्जस्थित निवासबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्यो । त्यो बेलासम्म ज्ञवाली फरार भइसकेका थिए ।
ज्ञवाली भागे, किस्ट प्रभु भयो
ज्ञवाली भागेपछि सीआईबीले उनीविरुद्ध बैंकिङ कसुरको मुद्दा दायर गर्यो । र, सँगै तत्कालीन किस्ट बैंकलाई तत्कालीन प्रभु विकास बैंकले एक्वायर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । प्रभुले ३० भदौ २०७१ मा किस्ट बैंकलाई एक्वायर गरेर प्रभु बैंक बनायो । प्रभु बैंकले १३ माघ २०७१ मा तत्कालीन किस्ट बैंकमा रहेको ज्ञवालीको सेयर बेचेर साँवा ब्याजसहित २३ करोड रुपैयाँ असुल गर्यो ।
भन्छन्ः कसैको पैसा खाएको छैन
बैंकिङ कसुरको अभियोग भोगिरहेका ज्ञवालीले आफूले कसैको एक पैसा पनि नआएको बताए । आफ्नो अवस्था जे जस्तो भए पनि पैसा खाएको अभियोग नलगाएको उनको भनाइ छ ।
धार्मिक पुस्तक लेख्दै
उनी अहिले जेलभित्रै धार्मिक पुस्तक लेखनमा व्यस्त छन् । आफ्नै जीवन भोगाइबारे पनि पुस्तक लेख्ने सोच उनमा नपलाएको होइन । तर, अब सांसारिक जीवन त्यागेर अध्यात्ममा लागेकोले आफ्नो गन्तव्य नै फरक रहेको उनको तर्क छ ।
‘केही पुस्तक लेखिसकेको छु, केही लेख्दै छु, मैले लेखेका वा लेख्ने पुस्तक धार्मिक विषयका हुन्,’ कुराकानीको बिट मार्ने बेलातिर ज्ञवालीले सुनाए ।
बृन्दावन बस्दादेखि पाल्न थालेको टुप्पी उनले अझै जोगाएरै राखेका छन् । अध्यात्ममा लागेको बताउने ज्ञवालीको मोटो र लामो टुप्पी छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख ३१, २०७६, ०५:००:००
शिव सत्याल/कृष्णसिंह लोथ्याल